प्रचण्डका गुरु वैद्य पनि ओलीकै पक्षमा, छिट्टै तालमेल,मोर्चावन्दीको तयारी,पार्टी एकता गर्ने घोषणा ! - Kamana News
काठमान्डौ । नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य ‘किरणले संसद् प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना जनताको अहितमा हुने बताएका छन् ।
विश्वमा संसदीय प्रणालीहरु असफल हुँदै गइरहेका छन् । नेपालले पनि विश्वका विभिन्न घटनाक्रमबाट पाठ सिक्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘अमेरिका र अरु मुलुक हुँदै नेपालसम्म आइपुग्दा संसद पूरै असफल भएको कुरा लुकेको छैन ।
उनले आफूहरु सधैं संसदीय प्रणालीको विरोधमा रहेको पनि दोहोर्यारएर । वैद्यले घोषित आमनिर्वाचन पनि जनताको पक्षमा नहुने बताए । ‘तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामै अन्योल छ,’ उनले भने, ‘यदि भइहाल्यो भने जनताको हितमा हुने गरी नतिजा आउँदैन ।
नेता वैद्यले साना र क्रान्तिकारी शक्तिसँग कार्यगत एवं पार्टीगत एकता तथा तालमेल गरेर अघि बढ्ने योजनामा आफूहरुको रहेको सुनाए । नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसँग कतिपय मुद्दामा असहमति रहे पनि उनले कुनकुन विषयमा मत नमिलेको हो भनेर प्रष्ट पारेनन् ।
तर असहमति र समस्याको हल भएमा विप्लवसँग पनि पार्टी एकता हुने जानकारी उनले दिए । वैद्यले जनताको अहितमा रहेको विषयलाई राजनीतिका नाममा बढवा दिन र पृष्ठपोषण गर्न नहुने विचार व्यक्त गरेका छन् ।
पद प्राप्तिका लागि मुर्खतापूर्ण हिसाबले जुनसुकै हत्कण्डा पनि अपनाउन थालिएको छ,’ वैद्यले भने, ‘जनजीविका, जनगणतन्त्र र कम्युनिष्टको साम्यवादमा पुग्ने लक्ष्य एवं सिद्धान्त विपरीत नेताहरु पदको लोभी बन्दा पार्टी विभाजनमा पुग्यो । संसद विघटन त्यस्कै परिणाम हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको प्रष्टीकरण :- मैले न्यायाधीशजीहरुलाई भेटेको छैन
यो गम्भीर प्रहार हो, यो भन्दा घिनलाग्दो के हुनसक्छ, उनले भने, उहाँहरु यो कुरालाई प्रमाणित गरेर देखाउन सक्नु हुन्छ ? ती नाम गरेका न्यायाधीशजीहरुलाई मैले सायद कहिले पनि भेटेको छैन ।
आइतवार, माघ ४ २०७७०७:३४:१०
# प्रचण्ड # केपी ओली # नेकपा # मोहन वैद्य ‘किरण
सरकार र विप्लव पक्षबीच सहमति
ओली पक्षीय सांसद ज्ञवाली र चौधरी दाहाल–नेपाल समूहमा
प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर फर्किए विप्लव